Sidee loo hagaajin karaa liisaska wax soo saarka ee Amazon by dhibcaha title iyo qodobka?
Looma baahna in la sheego in la kordhiyo iibka guud ee badeecadaada Amazon, waxaad u baahan tahay inaad siiso dhiiri gelinta dhammaan macaamiisha iman kara. Ugu dambeyntii, si loo hagaajiyo qiimaha is-beddelka ku qoran liiska alaabtaada iyo helitaanka dakhligaaga soo-geli kara ee soo-saarka. Laakiin sida loo sameeyo inta badan alaabtaada ku jirta iibka ayaa ka dhex muuqda natiijooyinka raadinta ee ugu sareysa ee ku yaala suuqa xaafaddaas. Waxaan aaminsanahay in fure u ah guulaha ganacsigaaga ee ka jira halkaas waxaa ku been ah saadaalinta liiska alaabtaada. Iyo qaybta ugu muhiimsan ee wax ku oolista liiska alaabtaada ee Amazon waxaa laga helayaa si toos ah mawduucaaga sheygaaga, sharaxaada iyo liiska dhibcooyinka qoraalka. Guud ahaan, waxaad u baahan tahay inaad meel kasta oo aad haysato la socoto ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah iyo jumlado raadin dheer-dheer ah si aad u hesho liiska alaabta ee Amazon leedahay fursadaha wanaagsan ee lagu muujiyo sare ee SERPs. Aynu aragno sida aad u sameyn kartid.
Abuuritaanka Xayeysi Amazon ah
Fikrad ahaan, waxaad bogga faahfaahsan ee badeecada waa inaad siisaa sharaxaad sax ah oo sheygaaga ah oo ku saabsan sheygaaga si aad u hesho macaamiishii aadka u rabi laheyd inay go'aankooda kama dambaysta ah qaataan iib ah adiga. Mar labaad, arrinta ayaa ah in hawshaada ugu weyn ee halkan ay tahay in ay noqoto mid sax ah oo soo koobaysa macquul - sababtoo ah macaamiishu waxay rabaan inay si cad u eegaan waxa ay doonayaan inay iibsadaan. Sidaa daraadeed, halkan waa qaybaha ugu muhiimsan ee bogga alaabta caadiga ah ee Amazon:
Tilmaamaha wax soo-saarka loogu talagalay keywords keywords keywords.
Liiska shan shaashadood oo ay ku jiraan waxyaabaha ugu muhiimsan ee sheyga / faa'iidooyinka.
Tilmaamaha badeecadda ee daboolaya astaamaha ugu weyn ee sheyga, oo ay weheliso waxyaalihii isticmaalka maalin kasta / dayactir ahaan (xaqiiqda, waa nooc ka sii ballaadhan ee dhibcahaaga).
Sawirada wax soo saarka, oo si faahfaahsan u tilmaamaya macnaha dhabta ah ee macaamil kasta oo ay la socoto sheygaas
Sidee loo hagaajin karaa Title ee Amazon
Naqshadeynta Maqaarka ee Naqshadaha ugu muhiimsan ee ku yaala Amazon:
Nooc kasta oo sheyga ah wuxuu leeyahay 200-dabeecadeed oo xadidan oo daboolaya sheyga ugu weyn ee wax soo saarka.
Warqadda koowaad ee erey kasta waa in lagu dhameeystiraa.
Dhamaan tirooyinka waxaa loola jeedaa in lagu qoro lambarrada.
Qalbigga waa in sidoo kale lagu qoraa.
Midabka / xajmiga alaabtu maaha mid la jecleysan karo, haddii aysan ahayn faahfaahin dhab ah.
Ha ku darin qiimaha badeecada, tirada macaamilka, macluumaadka iibsadaha, farriimaha farriimaha, ama wixii faallo ah ee figradaha ah (sida "iibiyaha ugu fiican," "iibka kulul," "heshiis wanaagsan," iwm.).
Waa kuwan qaar ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo liisaska qoraalladaada tilmaamaya habka saxda ah:
Liistada "ideal" liiska dhibcooyinka foojignaanta waa inay ka kooban yihiin shan shey oo asaasi ah oo si cad u tilmaamaya sifooyinka muhiimka ah ee sheyga si loo tixgeliyo macaamiisha, sida sifooyinka alaabta gaarka ah, cabbirka, guud macluumaadka ku saabsan damaanadda, iwm.
Bilaabidda rasmiga ah ee kasta waa in la kordhiyaa.
Hadal shakhsiyeed oo ka mid ah qori kasta waxaa lagula talinayaa in lagu kala tago semicolons.
Ha illoobin inaad si cad u qeexdid dhammaan cabbirada walxaha.
Sida ugu badan ee aad u isticmaashid sheygaaga sheyga, ha ku darin macluumaadka soo socda: Tacliinta, Qiimaha, Shirkada, Gaadiidka, ama macluumaadka iibsadaha gaarka ah - oo la sameeyo Source .